Ụbụrụ Brain: ụbụrụ nwa na-agbanwe na 25 dị afọ | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Ụdị Ihe Mgbochi Nwa Ogwu
Oge uto na-ebido n’ihe dị ka afọ iri ruo afọ iri na abụọ site na mmalite oge uto ma gaa n’ihu rue ihe dịka afọ 10. Ọ na-enye aka ịghọta na ụbụrụ nwa na-ahụ anya, na-arụ ọrụ na n'ụzọ dị iche na nke nwatakịrị ma ọ bụ nke okenye. Usoro ihe omume maka ịlụ di na nwunye na-agbawa mmụọ anyị na mbata nke homonụ mmekọahụ na oge uto. Nke ahụ bụ mgbe nlebara anya nwatakịrị ahụ si na bebi na ụgbọala ndị na-agba ọsọ gaa na nke mbụ bụrụ ihe kacha mkpa, mmeputakwa. Ya mere, amalite ịmata agụụ nke nwa ahụ banyere mmekọahụ na otu esi enweta ahụmịhe na ya.
Okwu TED na-esonụ (14 mins) site na onye ọkà mmụta na-ahụ maka nyocha ahụ bụ Professor Sarah Jayne Blakemore kpọrọ ihe omimi di omimi nke onu nwa, akọwa mmepe nke ụbụrụ na-eto eto dị mma. Otú ọ dị, ọ dịghị ekwu okwu banyere mmekọahụ, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ma ọ bụ mmetụta ya. Ozi ọma ahụ bụ na ọmarịcha a ngosi (50 mins). Ọ bụ onye prọfesọ nke neuroscience na National Institute of Drugs na US ma kọwaa otú ọnyá ndị na-egbu egbu dị ka mmanya na-aba n'anya ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ na usoro dị ka ịgba chaa chaa, ikiri ihe gba ọtọ na ịgba chaa chaa nwere ike imebi ụbụrụ nwa.
Nke a magburu onwe ya podcast (56 mins) site na Gary Wilson na-eme kpọmkwem otú ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ si emetụta ụbụrụ nwa. Ọ na-akọwa ihe dị iche n'etiti masturbation na-akpali agụụ mmekọahụ na-eji.
Oge ntorobịa bụ oge nke ịmụ ihe ngwa ngwa. Ọ bụ mgbe anyị na-amalite ngwa ngwa ịchọpụta ahụmịhe ọhụrụ na nkà anyị chọrọ maka ịghọ okenye na nkwadebe maka ịhapụ akwu. Ụbụrụ ọ bụla dị iche iche, kere ya ma jiri ya mụọ ihe.
Ọmụmụ ihe a na-eme ngwa ngwa ka ụbụrụ na-ejikọta ụgwọ ọrụ ụgwọ site na ijikọta mpaghara limbic na-eme ka ncheta anyị na mmetụta uche anyị dịkwuo ike na corpox mbụ, ebe na-achịkwa njide onwe onye, ​​iche echiche siri ike, ịtụgharị uche na ogologo oge atụmatụ. Ọ na-agbatịkwa njikọ n'etiti akụkụ ndị dị iche iche site na ịpịcha ụzọ ntụgharị kachasị jiri ya na ihe ọcha dị ọcha a na-akpọ myelin.
Mgbe oge nke ntinye na nhazighachi, ụbụrụ nwa na-agbazigharị ihe ndị a na-ejighi ya na njikọ dị iche iche na-ahapụ ụzọ siri ike nke a na-enweta site na ahụmahụ na omume ugboro ugboro. Ya mere ma ụmụ gị na-etinye oge ka ukwuu n'ime oge ha nanị na ịntanetị, ma ọ bụ na-eso ndị ọzọ na-eto eto, na-amụ ihe, na-amụ egwu ma ọ bụ na-egwu egwuregwu, ụzọ ndị a kachasị eji eme ihe ga-adị ka okporo ụzọ okporo ụzọ dị elu site n'oge ha toro.
N'oge ntorobịa, ọchịchọ nke obi ụtọ dị n'ogologo ya. Ọmụma ndị nọ n'afọ iri na ụma na-emepụta dopamine ma na-echekwu ya nke ọma, na-akwọ ha iji nwalee ụgwọ ọrụ ọhụrụ ma buru ihe ize ndụ. Ọnukwu dopamine na-enye aka ikpocha ma wusie ụzọ ọhụrụ ndị ahụ ike.
Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ndidi maka gory, ihe ijuanya, ihe mejupụtara, ihe nkiri egwu ndị ga-enwe ọtụtụ ndị okenye na-agba ọsọ ka ha zoo. Ha agaghị ezuru ha. Ihe ize ndụ bụ akụkụ dị mma nke mmepe ha, dịka njedebe ule, ikike siri ike, na-ekwupụta na ha bụ onye. Nke ahụ bụ ihe oge ntorobịa dị. Ha maara na ịṅụ mmanya, ịṅụ ọgwụ ọjọọ, inwe mmekọahụ n'enweghị nchebe na ịlụ ọgụ nwere ike ịdị ize ndụ, mana ụgwọ ọrụ nke 'ugbu a' dị ike karịa ichegbu onwe ya banyere ihe ndị ga-esi na ya pụta.
Ihe ịma aka a maka onye ọ bụla na-emeso ndị nọ n'afọ iri na ụma taa bụ na ụbụrụ nke na-eto eto na-enwe ike ịdaba na nsogbu ahụike nke uche na-agụnye ịṅụ ọgwụ ọjọọ, karịsịa ntanetị ịntanetị. Inwe otu ọgwụ ahụ nwere ike ịchụpụ ọchụchọ maka ihe ndị ọzọ na ihe ndị na-eme ka dopamine na-egwu egwu. Ya mere, ihe ndi ozo bu ihe ndi ozo, mmanya, ogwu, caffeine, igba ogba ocha n'igwe, egwu egwu na ịgba chaa chaa dika ihe ndi mmadu na-eme ka ha nwee nsogbu ma na aru ha.
Ibi maka ugbu a - igbu oge ịkwụsị
Gịnị kpatara nke ahụ? Maka na ihu ihu ihu na-arụ ọrụ dị ka 'njigide' na omume dị egwu amalitebeghị na ọdịnihu dị ogologo. A maara nke a dị ka ịkwụsịlata oge - na-ahọrọ afọ ojuju ozugbo maka ụgwọ ọrụ n'ọdịnihu, ọbụlagodi na nke ikpeazụ ka mma. Nnyocha dị mkpa dị na nso nso a egosiwo na ịntanetị na-eji onwe ya eme ihe dị elu igbu oge igbu oge. Nke a ga-abụ ezigbo nchegbu maka ndị nne na nna na ndị nkụzi. Nke a bụ aka isiokwu na isiokwu ahụ na-atụle nchọpụta ọhụrụ ahụ. Ihe zuru ezu dị Ebe a. Na nkenke, ndị na-egwu egwu bụ ndị kwụsịrị iji egwu porn maka naanị izu 3 chọpụtara na ha nwere ike igbu oge karịa agụụ ndị ahụ na-enweghị. Inwe ike igbu oge na-eju afọ bụ isi ndụ ọkachamara nke ike gwụrụ site na iji egwu egwu yana ọ nwere ike ịkọ maka nsonaazụ nnwale dara ogbenye, arụpụtaghị arụmọrụ na oke izugbe nke ọtụtụ ndị na-egwu porn. Ozi ọma ahụ bụ na nke a yiri ka ọ gbanwee oge mgbe ndị ọrụ kwụsịrị porn. Hụ ebe a maka ihe atụ nke onwe onye kọrọ nyocha akụkọ.
Mgbe anyị na-etolite, ọ bụ ezie na ụbụrụ na-aga n'ihu na-amụta, ọ dịghị eme otú ahụ ngwa ngwa. Ọ bụ ya mere ihe anyị na-ahọrọ ịmụta na oge uto anyị dị oké mkpa maka ọdịmma anyị n'ọdịnihu. Oghere nke ohere maka mmụta miri emi na-akọwa mgbe oge oge ahụ dị mkpa.
Brain Nwere Ahụ Ike bụ Brain Integrated
Ụbụrụ dị mma bụ ụbụrụ nwere ike ime ihe, nke nwere ike imetụta ihe na-esi na ya pụta ma mee mkpebi ndị dabere n'ebumnuche. Ọ nwere ike ịtọ ihe mgbaru ọsọ ma nweta ya. Ọ na-agbanwe nrụgide. Ọ nwere ike ịmụta àgwà na anaghịzi eje ozi. Ọ bụ okike ma nwee ike ịmụta nkà na àgwà ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ iji zụlite ụbụrụ nwere ike ime ihe ike, anyị na-emewanyewanye ma na-ewu echiche anyị, anyị na-etolite, anyị na-ahụ ihe na-eme gburugburu anyị ma na-echebara mkpa ndị ọzọ echiche. Anyị na-enwe ọganihu, na-enwe obi ụtọ ma na-enweta ike anyị.
<gwọ Ọrụ Sistemụ